Amaxesha okwehla kweBitcoin, ixesha lotyalo-mali? | Iindaba zeGajethi
UMiguel Gaton | | Imali engezantsi yedijithali
Emva kwawo onke amahla ndinyuka ahamba nobomi bemali ezigcina imali kwimbali yayo, abatyali mali bakho abaqhelekileyo baya kuba ngaphezulu kokuzisebenzisa kwezi meko zixakekileyo apho ukuxabiseka kwemali ye-elektroniki kutshintsha ngobusuku nje obunye.
Kodwa kuyinyani ukuba, kwabanye abaninzi, le meko iyaqhubeka nokuba luhlobo lwesizathu sokuba ungaqali urhwebo ngeBitcoin kunye nomthengisi okwi-Intanethi okanye phantsi kwayo nayiphi na enye indlela.
Kwaye xa zisenzeka amathontsi alolu hlobo kuqikelelo lwe-BTC kunye nezinye i-cryptocurrensets, abaninzi abayeki ukubona esi sesinye sezizathu zokuba bangatyali imali kuzo. Kodwa kuthatha kuphela uphononongo oluncinci lwesi slump samva nje-kunye nezinye zangaphambili-ukubeka ezi ntlobo zeziganeko kwimeko. Kananjalo ukubona ukuba, mhlawumbi, abanakuba kuphela yinto eqhelekileyo kwaye ke akukho mntu kufuneka abuye umva, kodwa lixesha elifanelekileyo lokutyala.
Okulandelayo, siza kuqwalasela eli tyala sikhumbula, ewe, ukuba alikho ixesha elininzi lokutyala imali kwi-cryptocurrensets, kodwa inye kuphela indlela yokwenza: ngononophelo, uninzi lwezifundo kwaye uhlala ucinga ngemingcipheko emininzi.
1 Ukuwa kwakutshanje
2 Imizekelo edlulileyo
Ukusukela ekuqaleni kwefayile ye- Ukubuyiselwa kwexabiso le-BTC emva ngoMeyi 2019 Khange ibonwe njengexabiso eliphantsi njengoko ingqekembe kaSatoshi Nakamoto ibonakalisile kwezi veki zidlulileyo. Njengoko kuxeliwe yiwebhusayithi yezindaba zezezimali iBloomberg, inqanaba le-6.500 16 yeedola kwiyunithi nganye eboniswe yiBitcoin ngoDisemba XNUMX yayingumgca omtsha wenkxaso kwaye, nkqu, ezinye iingcali zibanga ukuba ixabiso lingawela kwi-4.000 yeedola.
Ngokutsho kweengcali ezikhankanywe yinguqulelo ekwi-intanethi yale ndlela, ilahleko kuqingqo-mali oluphambili lwe-imali ebelunokubangelwa uhlaselo ngabasemagunyeni baseTshayina kulo naluphi na uhlobo lwenkohliso olunxulumene nokugcina imali, ubukho obungatshintshiyo bobusela kunye nee-hryptocurrencies kunye nokungabikho kokuzithemba ukuba ezi zinto zibangela abatyali mali abakhulu. Kwaye okwangoku, ngaphandle kwako konke oku, kunokwenzeka ukuba ucinge ukuba ayizukuba kukugqibela ukuwa oku. Kuba, mhlawumbi, kuya kubakho ukubuyela kwakhona. Njengoko sele yenzekile amaxesha amaninzi.
Ixabiso lentengo yeBitcoin kude kube nguDisemba 2019
Bitcoin ixabiso lembali -Kwaye kwisandla sakhe nakwezinye i-cryptocurrensets- uluhlu lweentaba kunye neentlambo ezingabonakalisi nto kuqhelekile kolu hlobo lweeasethi. Eyokuqala yezi ziphene inokufumaneka kwiintsuku zokuqala zeBitcoin, xa eli gama belingathethi kangako, ngehlobo lowama-2011. ngaphezu kwedola kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Nangona kunjalo, ngaphambi kokuphela konyaka, i-cryptocurrency ibibuyele ezantsi isiya kwiidola ezimbini.
Kwakhona, kwihlobo elilandelayo kwakhona kwaphawula ukuqala kwencopho. Kwiidola ezintandathu ngoJuni 2012, iBitcoin yafikelela kufutshane ne-1.000 2013 ngoNovemba 2015 ... de yawa phakathi ku-200 ukusondela kwi-XNUMX yeedola.
Kodwa okona kulungileyo kwakuseza kuza. Ekuqaleni kuka-2017, iyunithi ye-BTC yabiza kufutshane ne- $ 1.000. Ekupheleni kwaloo nyaka, ixabiso lawo lalikufutshane nama-20.000. Ixesha lokuhlanya kwi-BTC laqala. Kunyaka kamva yawa ngaphantsi kwe-3.000. Isiqingatha sonyaka kamva sasondele kwi-12.000. Nge-16 kaDisemba ndaye, kwakhona, kwintlambo. Kwintlambo yama-6.500 XNUMX.
Sibonile njengoko sibonile, akukho ntlambo okanye incopho kwimbali yeBitcoin engaguqukiyo. Inkqubo ye- amaxabiso ehla enyuka ngokungalindelekanga kwaye akukho mntu, okanye phantse akukho mntu, onokuyilindela. Ke, ngaba kunokuthiwa le ntlambo intsha lixesha elibi lokutyala? Ewe, inyani kukuba hayi. Kutheni le nto inokuba njalo, kuba akukho mntu waziyo ukuba iya kuqhubeka ukuwa ngokungapheliyo.
Okanye mhlawumbi, ngubani owaziyo, okwangoku sikwiqondo eliphantsi entlanjeni. Kwaye konke okuseleyo ukusukela ngoku kukunyuswa okutsha. Siza kubona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Te knoloji » Imali engezantsi yedijithali » Amaxesha okwehla kweBitcoin, ixesha lotyalo-mali?
Ukuqhutywa kweethambo ngehedfoni: EmvaShokz Aeropex [Hlaziya]